February 2017 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ရွှေစက်တော်ကို ဘုရားဖူးလာသူတိုင်း ဖုန်းမှာထည့်ထားသင့်တဲ့ မန်းရွှေစက်တော် Application v1.2.0
Maung Pauk at 10:38:00 PM 0
မန်းရွှေစက်တော် Application အကြောင်း
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားသို့ ဘုရားဖူးလာရောက်မည့် မိဘပြည်သူများ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သော နေရာများ၊ အရေးပေါ်ဖြစ်ချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ နှင့် အခြားသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လွယ်လင့်တစ်ကူ သိရှိနိုင်ကြစေရန်။
-မန်းရွှေစက်တော် Application တွင် ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ ရွှေစက်တော်ရာသီဥတု (၇) ရက်စာ၊ ရွှေစက်တော် သတင်းအမှန်၊ ပုံပြခန်း စသည်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
-ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွင် အထင်ကရနေရာများ (ရွှေစက်တော်သို့ရောက်လျှင် သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သော နေရာများကို GPS ဖြင့် အနီးဆုံးနေရာကို
ဦးစားပေးဖော်ပြပေးခြင်း၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ ခုပြ၍ ထပ်မံကြည့်ရှုလိုပါက Infinite Scroll ဖြင့် ထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း)
-တည်းခိုဆောင်များ (ဖုန်းဆက်၍ ကြိုတင် ဘိုကင်လုပ်ထားနိုင်စေရန်)
-အများပြည်သူသုံးအိမ်သာများ (အိမ်သာ ဘယ်နားလည်း မသိရ မရှိရလေအောင်)
-ကျန်းမာရေး (ကျန်းမာရေး တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနကို သိရှိရလေအောင်)
-ရဲစခန်းများ ( Hot Line အပါအဝင် )
-မီးသတ်စခန်းများ ( Hot Line အပါအဝင် )
အစရှိသည်ဖြင့် စုံလင်စွာ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
-ထပ်မံ၍ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် ဘုရားကြီးရှိ ရွှေဆိုင်းအရောင်းနှင့် အလှူငွေ ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရရှိသော ကော်နက်ရှင်ပေါ်မူတည်၍ ရနိုင်သမျှသော အချက်အလက်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
-အဲဒါကြောင့် မန်းရွှေစက်တော်ကို အလည်တစ်ခေါက် ဘုရားဖူးမှ လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့် Man Shwe Set Taw apk ကို Install လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် အခက်အခဲအချို့ကို ဒီ apk လေးက ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
Download Man Shwe Set Taw apk : 29.78 Mb
Android Application Android Editor Phone Application
Android ဖုန်းထဲမှာ အလန်းစား Video တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ VivaVideo Pro v4.5.8
VivaVideo ဟာ Android ဖုန်းထဲမှာတင် Video တွေကို အလန်းစားဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်နဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်ပြီး တကယ့်အလန်းစား Video တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်... ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Video တွေကို Social Media တွေပေါ်ကို တိုက်ရိုက်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်.. Pro version ဖြစ်တာကြောင့် Viva Video ရဲ့ Water Mark လည်းမပေါ်တော့တဲ့အပြင် Special Feature တွေကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်..
Download VivaVideo Pro v4.5.8.apk : 32.7 Mb
Android Tool PC Tool
ANDROID MODE - 1
Ye Naing at 11:24:00 AM 0
Need to know adb !
IDM ( Internet Download Manager ) 6.27 Build5Full
ဒီနေ့ အသစ်ထွက်လာတဲ့ IDM ဗားရှင်းသစ် 6.27 Build5ဖြစ်ပါတယ်.. Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားက Tray ထဲက IDM icon လေးကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး exit လုပ်ပါ.. သို့မဟုတ် Task Manager ခေါ်ပြီး Internet Download Manager ကို End Task လုပ်ပါ.. Patch ကို Run ပြီး ပထမ နာမည်ပေး OK နှိပ်၊ ဒုတိနာမည်ပေး OK နှိပ်ရုံနဲ့ Full Version ဖြစ်ပါပြီ..
Download IDM 6.27 Buld5Setup : 6.61 Mb
Google Chrome Browser For Windows v56.0.2924.76
Maung Pauk at 10:18:00 PM 0
Google Chrome Browser Version သစ် Offline Installer ပါ.. Windows PC အတွက်ဖြစ်ပါတယ်.. Chrome Browser ဟာ အခြား Browser ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုလည်း အလွယ်တကူပဲ Translate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. RAM ကတော့ အခြား Browser တွေထက် နည်းနည်းပိုစားပါတယ်.. Google က ထုတ်တဲ့ Browser ဖြစ်တာကြောင့် Web တွေကို Browse လုပ်တဲ့အခါ error ကင်းကင်းနဲ့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်..
What is NEWS :
- Unauthorised file access in Devtools.
- Out of bounds memory access in WebRTC.
- Heap overflow in V8.
- Address spoofing in Omnibox.
- Heap overflow in Skia.
- Use after free in Renderer.
- UI spoofing in Blink.
- Uninitialised memory access in webm video.
- Universal XSS in chrome: // apps.
- Universal XSS in chrome: // downloads.
- Use after free in Extensions.
- Bypass of Content Security Policy in Blink.
- Type confusion in metrics.
- Heap overflow in FFmpeg.
- UI spoofing. Credit to Ronni Skansing.
Download Google Chrome v56.0.2924.76 :
Maung Pauk at 6:21:00 PM 0
Adobe Photoshop CC 2017 18.0.1.29 (64bit) Portable
Double Click ခေါက်ရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Adobe Photoshop CC 2017 18.0.1.29 (64bit) Portable ဖြစ်ပါတယ်.. Adobe Photoshop CC 2017 18.0.1.29 (64bit) ရဲ့ Feature အပြည့်အစုံ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Portable ဖြစ်လို့ Install လုပ်စရာမလို၊ Crack ဖြည်စရာမလိုပါဘူး.. Double Click နဲ့ အဆင်မပြေရင် Run as Administrator နဲ့ Run လိုက်ပါ..
Home Page : https://www.adobe.com/products/photoshop.html
Download Adobe Photoshop CC 2017 18.0.1.29 (64bit) Portable : 1.35 Gb